အသက်သုံးနှစ် အရွယ်ကလေးငယ်အား စွန့်ပစ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အသက်သုံးနှစ် အရွယ်ကလေးငယ်အား စွန့်ပစ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွား
အသက်သုံးနှစ် အရွယ်ကလေးငယ်အား စွန့်ပစ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွား
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on May 16, 2011 in Copy/Paste | 10 comments
ရွှေတိဂုံစေတီတော် စနေထောင့်ရှိ အောင်ရွှေထီး တန်ဆောင်း၌ အသက်သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးအား စွန့်ပစ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ် မေလ ၁ ရက် နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စွန့်ပစ်ခံရသည့် ကလေးငယ်ကို မေလ ၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီ ၃၀ အချိန်ဝန်းကျင်တွင် အဆိုပါတန်ဆောင်း၌ တာဝန်ကျ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက တွေ့ရှိခဲ့၍ ဂေါပကအဖွဲ့ အား အကြောင်းကြားခဲ့ရာ ဂေါပက အဖွဲ့မှ ကလေးငယ်တွေ့ရှိသည့်အချိန် မှစ၍ ည ၁၀ နာရီအထိ ရင်ပြင်တော်ပေါ်တွင် လော်စပီကာများဖြင့် ကလေးငယ်တစ်ဦး တွေ့ရှိကြောင်း နှိုးဆော်ပေးသော်လည်း ကလေးအား ပြန်ခေါ်သူ မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သုံးနှစ်တောင်ရောက်နေပြီ ပစ်ထားတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး … လူမဆန်တဲ့ မိဘမျိုးပဲ … ။ တချို့ကလေးတွေဆို အမေနာမည် အဖေနာမည် မှတ်မိနေတတ်တယ်… ။ ရဲတွေ တကယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျှင်တော့ … ပစ်ခဲ့တဲ့လူတွေကို ပြန်ရှာပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်မှာပါ …။
မိဘနဲ့ လူကွဲလာတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ တခါတလေ အတူလာတဲ့သူနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ကွဲလာတာဆို မိဘတွေခမျှာ ရင်ကွဲမယ်။
အခု ဒီကလေးကို ဘယ်မှာခေါ်ထားတာလဲ … မိဘမဲ့ကျောင်းပို့လိုက်ပြီပေါ့နော် ..
ကလေးနဲ့ မိဘ လူချင်းကွဲတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲံ (3) နာရီထိုးကတည်းကတွေ့တဲ့ကလေးကို ည (10) နာရီအထိ မိဘတွေက လိုက်မရှာနိုင်ကြဘူးလား ကလေးကတော့ သနားပါတယ် .
မိဘနဲ့လာတာ မဟုတ်ပဲ ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟတွေနဲ့ အတူလာတာမို့ ဂရုစိုက်မှုနည်းပြီး ပျောက်နေတာလားမသိ။ ငယ်ငယ်က မောင်နှမတွေ အသိတစ်ယောက်နဲ့ မြေပဒေသာကျွန်း သွားလည်တယ်။ ကလေးတွေချည်းပဲမို့ လျှောက်လည်တဲ့ဆီပဲ အာရုံရောက်နေပြီး အငယ်ဆုံးမောင်လေး တစ်နေရာမှာ ကျန်ခဲ့တာ သတိမထားမိဘူး။ သတိရတော့ လည်း လိုက်ရှာတာ မတွေ့ဘူး။ မောင်လေးကလည်း ငယ်တော့ မသွားတတ် မလာတတ်နဲ့ ငိုနေတာကို အဲဒီနားမှာ ဈေးရောင်းတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က တွေ့ပြီး လိုက်ရှာပေးတယ်။ သူရှာ ကိုယ်ရှာနဲ့ မိုးချုပ်ကာနီးမှာ ကလေးကို ပြန်တွေ့တယ်။ ကလေးပျောက်သွားရင်တော့ဆိုတာကို စဉ်းစားမိပြီး အရမ်းကြာက်သွားတယ်။ အဲဒီကစပြီး နောက်ဆို ကလေးတွေနဲ့ သွားတဲ့အခါ ကလေးတွေကို လူစုကွဲသွားရင် ကွဲသွားတဲ့နေရာမှာပဲ စောင့်နေ။ ပြန်လာရှာမယ်လို့ ပြောထားရတယ်။
ကောင်းကောင်း မွန်မွန် မွေးစားမဲ့ သူ ရှိရင်တော့ ကောင်းမယ်။
လူစိတ်ဆိုတာ လည်း ကြောက်စရာ ကောင်းသား ပြစ်တုန်းက ပြစ်ပြီး.. နောက်မှ ဟိုလို ဒီလို ဖြစ်လာရင် ခက်အုန်းမယ်။
ဖြစ်နေကျပါပဲ အဖြစ်မှန်သိမှပြောတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
OQ ပြောသလိုပဲ ဘာမှသေချာမသိခင်တော့ အားလုံးဖြစ်နိုင်တာချည့်ပဲ…။ မစွန့်ပစ်ဖူးလို့လဲ ပုံသေပြောမရပါဘူး…။ ကံစီမံရာပေါ့….။ ကိုယ့်အလှည့်ကျမနွဲ့ကြစတမ်း…….. !
လူပီသတဲ့ သူတွေရှိမယ်… လူမပီသတဲ့သူတွေရှိမယ်….
ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်အတွက်လည်း.. ရှေးကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ်တွေရှိမယ်…
မွေးပြီးမှ ပစ်တာတွေရှိမယ်… မမွေးခင် ပစ်တာတွေရှိမယ်…
ဘယ်သူ့အတွက်မဆို အကျိုးတရားတွေရှိမယ်… အကြောင်းတရားတွေရှိမယ်..
ဒါဆို ကလေးငယ်က အဟောင်း… ပစ်သွားသူက အသစ်များ ဖြစ်မလား..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဒါတွေကို ရှုံ့ချရမယ်… အပြစ်ပေးရမယ်…
စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အရေးယူလို့များ ရနိုင်မလား… ဥပဒေအရ….
ပစ်မသွားဘဲနဲ့ ခိုင်းစားနေတာ အပါအ၀င်ပေါ့…
သတ္တ၀ါအားလုံး ဘေးရန် ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲကင်းအောင် နေထိုင်တတ်ကြပါစေ….